‘Umphakathi mawuxhumane nama-CPF’ | News24
‘Umphakathi mawuxhumane nama-CPF’
ISITHOMBE: nosipho mkhize UMnuz Matthews Buthelezi onguSihlalo we-CPF
USIHLALO wesiGungu esiphezulu esihlanganisa amaphoyisa nomphakathi phecelezi i-Community Police Forum (CPF), yase-Pinetown ephethe isigungu esincane sase-Kloof, uMnuz Matthews Buthelezi uthe, umsebenzi we-CPF ukusebenzisana namaphoyisa ukuze kuliwe nobugebengu emphakathini.
Uthe iningi labantu emphakathini bazitshela ukuthi i-CPF iyizi mpimpi zama phoyisa, wathi lokho akusilo iqiniso.
Uthe: “Abantu banemicabango eyehlukile nge-CPF, bathi le nhlangano iyizi mpimpi zamaphoyisa ekubeni le nhlangano ilekelela umphakathi ukuze uxhumane namaphoyisa uma kukhona ubugebengu emphakathini,” kusho yena.
Uthe inselelo ababhekene nayo kulo msebenzi, wukuthi abantu bayesaba ukubika amacala emaphoyiseni nokuthi abanye abazibandakanyi nale nhlangano.
Uthe: “Njengamalungu ale nhlangano sibekelwe ukuthi sisize umphakathi esihlala kuwo, ukuze uvikeleke ebugebengwini, kodwa esikhathini esiningi amalungu omphakathi awabiki ngamacala enzeka ezindaweni ahlala kuzo, ngenxa yokwesaba, kanti uma bebika ngalawo macala kuzo kwenza umsebenzi wethu ube lula ukuze siqhamuke namasu okuthi singanciphisa kanjani ubugebengu kuleyo ndawo,” kusho uMnuz Buthelezi.
Uqhube wathi zikhona izindlela zokuthi umphakathi uzibophele isigebengu uma sibanjwe sigila umkhuba, lokho kubizwa ngokuthi yi-Community Arrest.
Uthe:“I-Community Arrest, ayichazi ukuthi umphakathi kumele uzibambele wona ngezandla ngokuthi ushaye isigebengu, ngoba lokho kuyicala. I-Community Arrest ichaza ukuthi umphakathi unemvume yokubamba isigebengu, sigadwe ukuthi singabaleki bese beshayela amaphoyisa, uma bengakwazi ukuxhumana namaphoyisa, kumele bexhumane ne-CPF bese i-CPF ixhumana namaphoyisa.”
Uthe okuhle wukuthi izinga lokugqekezwa ezindlini selehlile, ngoba izindawo eziningi zisungule ithimba lama-neighbourhood watches, okuyilabo abafana njengo nogada basemphakathini.
“Sicela amalungu omphakathi eqikelele ukuthi asungula ithimba lama-neighbourhood watches, ukuze izigebengu zingalitholi ithuba lokuganga emphakathini,” kusho yena
Unxuse abantu ukuthi bazibandakanye nezigungu ezincane (sub-forums) ezingaphansi kwesigungu esiphezulu.
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngama-CPF nama Sub-Forums ungashayela uMnuz Matthews Buthelezi enombolweni ethi: 083 262 9981